कम्प्यूटर प्रबिधिबाट शल्यक्रिया - नेपाल समय
कम्प्यूटर प्रबिधिबाट शल्यक्रिया
प्रबिधीको प्रयोग गरेर अनुहारको हड्डिको सर्जरी अर्थात कम्पयुटर सफ्टवेयरबाट गरिने अनुहारको शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ । गत शुक्रबार वीर अस्पतालको डेन्टल विभागले सो शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो। वीरमा पहिलो पटक गरिएको सो शल्यक्रिया काठमाडौंका एक २७ वर्षीय युवकको दाँतमा गरिएको हो ।
उनको अनुहरको तल्लो भागको हड्डी लामो र बाहिर निस्केका कारण शल्यक्रिया गरिएको चिकित्सकले जनाएका छन् । हड्डी बढी भएको कारण उनको च्यापु लामो देखिएको र अघिल्लो दाँतले खाना चपाउन नसक्ने समस्या थियो। चिकित्सकहरुको संयुक्त टोलीले छ घण्टामा शल्यक्रिया सम्पन्न गरेका हुन् । शल्यक्रियाको क्रममा युवकको चार ठाउँका हड्डी काटेर जोडिएको छ ।
अर्थोडोन्टिक्स युनिट ( तार बान्ने बिभाग) को नेतृत्वो डा. मनिष बज्राचार्यले गर्नुभएको थियो भने ओरल तथा म्याक्सोफेसियल सर्जरी को नेतृत्वो सर्जन डा. किशोर भण्डारीले गर्नुभएको थियो । शल्यक्रियाको कम्प्युटर प्लानिङ ओरल तथा म्याक्सोफेसिअल सर्जन डा.कृष्ण रेग्मीले गरे । उनी सर्जरीको कंप्यूटर प्लानिंग तथा थ्री डी टेक्नोलॉजीमा बिशेष दखल राख्छन ।
शल्यक्रियामा एनेस्थेसियातर्फ डा. अभय पोख्रेल, अर्थोडोन्टिकतर्फ डा. अभिलाषा, डा. निशा सहभागी थिए ।शल्यक्रियामा अन्य ओरल तथा म्याक्सोफेसिअल सर्जन डा.बन्दना खनाल , डा.इस्फा हक , डा. सन्ध्या जोशि , डा.कृष्ण रेग्मी संलग्न थिए।
नया प्रबिधी हेर्न सिक्न पाउनु ओरल तथ म्याक्सोफेसिअल रेजिडेन्ट डा . गौरव कर्ण र डा .जितेन्द्र खत्री को लागि खुसीको कुरा हो । शल्यक्रियापछिको सुरुको अवस्था सफल भइरहेको र थप परिणाम तीन-चार सातापछि मात्र भन्न सकिने चिकित्सकले बताउँछन् । ‘कुनै पनि शल्यक्रिया केही सातापछिसम्म सामान्य रह्यो भने मात्र पूर्ण सफल मान्न सकन्छि,’ उनिहरुको भानाइ छ ।
तर प्रविधिको दृष्टिले भने शल्यक्रिया सफल भएको क़ुरा उनीहरु बताउछन । यो प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक भएको शल्यक्रियामा सहभागी चिकित्सक डा. भण्डारीले बताए । डिजिटल प्लानमा गरिएको सो शल्यक्रिया बिरामी र चिकित्सक दुवैका लागि फलदायी हुन्छ । यो प्रविधिमा हड्डिको कुन भागको कति शल्यक्रिया गर्ने भन्ने यकिन कम्पुटर सफ्टवेयरमै गरिन्छ ।
पहिला कम्प्युटरमा शल्यक्रिया गरेर सर्जरी पछि बिरामीको अनुहार कस्तो हुन्छ भन्ने हेरिसकेपछि मात्रा , बिरामीको अनुहारको सर्जरी गरिन्छ. यो शल्यक्रियाका लागि दाँतलाई विशेष प्रविधिबाट बाँधेर तयारी अवस्थामा राख्ने काम अर्थोडोन्टिक्स विभागका चिकित्सक डा. मनिष बज्राचार्यले गरेका थिए भने अनुहारकको हड्डी केकती कट्ने भन्ने प्लान डा. किशोर र डा. कृष्ण ले गरेका थिए । शल्यक्रियापछिको दाँत बाँध्ने काम पनि डा. मनिशले नै गर्नेछन् । सामान्यतया यस्तो प्रक्रिया को उपयोगबाटा छ महीना देखि दुई वर्ष सम्मा माँ अनुहारको आकर प्रकार परिबर्तन गर्ने सकिन्छ ।
कोरिया , जापान , चीन , अमेरिका , बेलायत लगायतका मुलुकमा बिकसित भइसकेको यो सर्जरी नेपालमा भने भर्खरै मात्रा भित्रिएको हो । यस अघि सन् २०१६ देखि अस्पतालमा मुख तथा अनुहारको हड्डीको शल्यक्रिया सुरु गरिएको थियो । डिजिटल प्लानमा आधारित भने यो पहिलो शल्यक्रिया हो । म्यानुल अर्थात् पुरानो प्रविधिबाट अस्पतालमा यस अघि नै चार वटा सफल शल्यक्रिया भइसकेका छन् । १५ जना यस्तै शल्यक्रियाको पर्खाइमा छन् ।
यो प्रविधीबाट दाँतको हड्डीको शल्यक्रिया गर्दा शल्यक्रियापछि जटिलता नआउने, बिरामीको माग अनुसारको स्वरुपमा शल्यक्रिया गर्न सकिने, शल्यक्रियामा कम समय लाग्ने, शल्यक्रिया गर्दा ठिक्क मात्र काटिने सुविधा हुन्छ। हाल शल्यक्रियाको लागि डा. कृष्ण को ब्यक्तिगत कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर प्रयोग गरिएको र आगामी शल्यक्रियाको लागि भने अस्पताल आफैंले व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।
हड्डी बढ्दा हुने गडवडी, जिनमा आएको गडवडी, चोटपटक, वंशाणुगत कारण, दाँत तथा कानमा आउने टियुमरको कारणले अनुहारको हड्डी लामो हुने, बिग्रिने, बाँगो हुने लगायतका समस्या उत्पन्न हुन्छन् । वीर अस्पतालमा यो शल्यक्रियाको लागि हालको शुल्क तीनदेखि पाँच हजार तोकिएको छ । शल्यक्रियामा आवश्यक सामग्री भने बिरामी आफैंले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । निजीको तुलनामा वीरमा यो सेवा कम खर्चिलो भएकाले बिरामीलाई लाभदायी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्।